စင်္ကာပူ နိင်ငံရဲ့ Merlion Park တနေရာ (ဓာတ်ပုံ- Roslan RAHMAN / AFP)
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး အသွားအလာကန့်သတ် စည်းမျဉ်းတွေချမှတ်ထားတာကို နောက်တပတ်ကစပြီး ဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု အသစ်တွေရှိခဲ့တာကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ချက်တွေကိုပြန်ချမှတ်ထားခဲ့တာပါ။လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကစလို့ လူ ၅ ယောက်ထိစုဝေးခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ကစပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်စားခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သောကြာနေ့ကစပြီး အသက် ၃၉ နှစ်နဲ့ အောက်တွေနဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီး ပြန်ကျန်းမာလာတဲ့သူတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖြေလျှော့ပေးတာနဲ့အတူ အားကစားရုံတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေလို လူအများ နှာခေါင်းစည်း မတပ်ဆင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပုံမှန် COVID-19 မစစ်မနေရ အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။
ကိုဗစ် ရှိမရှိ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာ လေးမျိုးကိုလည်း ပြည်သူတွေကို ရောင်းချပေးဖို့ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ စင်္ကာပူလူဦးရေရဲ့ ၄၄% ၊ အရေအတွက် ၂. ၅ သန်းဟာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံးတကြိမ်ထိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် အပြည့်အဝထိုးပြီးတဲ့သူက ၁.၉ သန်း လောက်ရှိပါတယ်။ လာမယ့် သြဂုတ်လမှာ လူဦးရေရဲ့ ၅၀% ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနိုင်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
စင်ျကာပူမှာ ကိုဗဈဆိုငျရာကနျ့သတျခကျြတှေ ဖွလြှေော့ပေးတော့မယျ
စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ COVID-19 ကူးစကျမှု ထိနျးခြုပျရေး အသှားအလာကနျ့သတျ စညျးမဉျြးတှခေမြှတျထားတာကို နောကျတပတျကစပွီး ဖွလြှေော့ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
စင်ျကာပူမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေထဲ ပွညျတှငျး ကူးစကျမှု အသဈတှရှေိခဲ့တာကွောငျ့ အသှားအလာ ကနျ့သတျခကျြတှကေိုပွနျခမြှတျထားခဲ့တာပါ။လာမယျ့ တနင်ျလာနကေ့စလို့ လူ ၅ ယောကျထိစုဝေးခှငျ့ပွုမှာဖွဈပွီး ရောဂါကူးစကျမှု ထိနျးခြုပျနိုငျရငျ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနကေ့စပွီး စားသောကျဆိုငျတှမှော ထိုငျစားခှငျ့ပွုမှာ ဖွဈပါတယျ။သောကွာနကေ့စပွီး အသကျ ၃၉ နှဈနဲ့ အောကျတှနေဲ့ ကိုဗဈကူးစကျပွီး ပွနျကနျြးမာလာတဲ့သူတှကေို ကာကှယျဆေးထိုးပေးသှားမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီလို စညျးကမျးသတျမှတျခကျြတှကေို ဖွလြှေော့ပေးတာနဲ့အတူ အားကစားရုံတှနေဲ့ စားသောကျဆိုငျတှလေို လူအမြား နှာခေါငျးစညျး မတပျဆငျတဲ့ နရောတှမှော လုပျကိုငျနတေဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ပုံမှနျ COVID-19 မစဈမနရေ အမိနျ့ထုတျထားပါတယျ။
ကိုဗဈ ရှိမရှိ ကိုယျတိုငျစဈဆေးနိုငျတဲ့ ကိရိယာ လေးမြိုးကိုလညျး ပွညျသူတှကေို ရောငျးခပြေးဖို့ အစိုးရက ခှငျ့ပွုထားပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနအေ့ထိ စင်ျကာပူလူဦးရရေဲ့ ၄၄% ၊ အရအေတှကျ ၂. ၅ သနျးဟာ ကိုဗဈကာကှယျဆေး အနညျးဆုံးတကွိမျထိုးပွီးဖွဈပါတယျ။ ကာကှယျဆေး နှဈကွိမျ အပွညျ့အဝထိုးပွီးတဲ့သူက ၁.၉ သနျး လောကျရှိပါတယျ။ လာမယျ့ သွဂုတျလမှာ လူဦးရရေဲ့ ၅၀% ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးနိုငျဖို့ အာဏာပိုငျတှကေ မြှျောမှနျးထားပါတယျ။